Vizzaneta Izindawo Eziqashwayo Zeholide & Amakhaya - Tuscany, i-Italy | Airbnb
Vacation rentals in Vizzaneta
Izindawo eziqashwayo zeholide ezinconywa kakhulu e- Vizzaneta
“Hlala kahle! Indawo ihlanzekile ngokuphelele futhi intofontofo kakhulu, indawo itholakala kahle futhi itholakala kalula. Isitolo sezemidlalo sihle kakhulu futhi indawo yokudlela yaseVilla izitebhisi ezimbalwa eduze. I-Woodland ingaphesheya komgwaqo futhi ijabulisa kakhulu, ukusuka lapha ungahamba uvakashele iNational Reserve futhi ujabulele ukubukwa ngokuhamba kosuku. Umsingathi u-Adriano nomndeni wakhe bahlala betholakala benobungane lapho kudingeka kodwa futhi bahlakaniphile kakhulu futhi njalo kuyaziswa kakhulu. Ukuzihlola ebhokisini lokukhiya kukhulu futhi, nezinsizakalo kanye ne-pasta netiye lekhofi ekhishini a plus !!”
Amasevisi athandwayo ase- Vizzaneta ezindawo eziqashwayo zeholide
Ezinye izindawo ezinhle eziqashwayo zeholide e- Vizzaneta